ပျား နဲ့ ယင် - PALnet
ပျား နဲ့ ယင်
အားလုံးသော မိတ်ဆွေ‌အပေါင်း မင်္ဂလာပါ...
ယခုရက်ပိုင်းမှာ Hive ဈေးက ခုန်တက်သွားတော့ အာရုံစိုက်စာရေး ပို့စ်တင်ကြနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်... ပန်းပွင့်တို့ ပွင့်လန်းရာမြေမှာ ဝတ်ရည်စုတ်ယူဖို့အတွက် ပျားလေးတွေ လူးလာ‌ခေါက်တုံ့ပျံဝဲနေကြလေပြီ... ပန်းတို့ရနံ့ ပန်းတို့ရဲ့အဆင်းက လှပတင့်တယ်နေကြသလို ပျားလေးတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် ပျားအုံမှာ ပျား‌ရည်တွေ စုမိကုန်ကြလေပြီ... ပျားရည်ထုတ်လို့ ပျားရည်ရောင်းစားကြရုံပဲပေါ့လေ(ကျုပ်အဖို့ကတော့ထုတ်ရောင်းစရာ ပျားရည်ကတော့ မရှိလေပြီ)
ပန်းခင်းမှာ ပျားတို့ပျော်မြူးကြပေမယ့်လည်း ယင်ကောင်ဆိုတဲ့ အကောင်ကတော့ အပုပ်အစပ် အညှီအဟောက်တွေပေါတဲ့ အမှိုက်ပုံလိုနေရာမျိုးတွေမှာ လောက်ကောင်တဖွားဖွားနဲ့ ပျော်မြူးနေကြစမြဲ... ပန်းရနံ့ကို သူတို့မရ... အပုပ်နံ့ကိုသာသူတို့ရနေကြတယ်... အတောင်ပါတာချင်းလည်းတူ လေပေါ်ပျံဝဲကြတဲ့သဘာဝလည်းတူပေသော်ငြားလည်း ပျား နဲ့ ယင်ကောင် လားလားမှမဆိုင်တဲ့အဖြစ်ကို မြင်သူတိုင်းက ဆင်ခြင်အတုယူနိုင်ကြသင့်ပါတယ်...
ပန်းရနံ့ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပျားတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် ပျားရည်က လူသားတို့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုနေပါတယ်... ကဲ-ကိုရွှေ ယင်ကောင်များကတော့ ဘာထုတ်ကုန်တွေကိုများ ထုတ်လုပ်နေပါသလဲ? အပုပ်အစပ် အညှီအဟောက်ကိုသာ မက်မောတဲ့ ယင်ကောင်များရဲ့ထုတ်ကုန်များကတော့ လူသားတွေကို အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားများပဲဖြစ်ပါတယ်... ယင်ကောင်ကြောင့် ဖြစ်ပွားရတဲ့ ရောဂါတွေက ကမ္ဘာမှာ အများအပြားပဲမဟုတ်ပါလား...
လူတော့ဖြစ်လာကြပါတယ်... ပန်းခင်း ပန်းရုံကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပျားလို လူမျိုးတွေ ဖြစ်လာကြပါရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် အမှိုက်ပုံလို အမှိုက်တွေပုံနေတဲ့နေရာက အပုပ် အစပ် အညှီ အဟောက်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ယင်ကောင်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်နေကြသလားဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင် သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါပဲ... လူချင်းတူပေမယ့် အသက်ရှုတာချင်းကွဲတယ်လို့လည်း ပြောတတ်ကြသေးသဗျ...
ပန်းရုံမှာ နေ့တိုင်းပျားအုံသလိုပဲ Hive Platform မှာ ပျားတွေလိုပဲ နေ့တိုင်း စုံပြုံနေကြတော့မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်... ပန်းရုံမှာ ပျားအုံရင် ပျားရည်တွေ တိုးပွားလို့ ပျားရည်တွေ ကောင်းကောင်းရောင်းစားနိုင်မယ် မဟုတ်လား? ပန်းရုံမှာ ပျားတွေလိုမအုံပဲ အမှိုက်ပုံမှာ ယင်ကောင်တွေလို အုံတိုးနေရင်တော့ ရောဂါတိုးသွားနိုင်ပါတယ်... နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ပန်းရုံမှာ ပျားအုံသလို Hive မှာ တိုးဝှေ့ စာရေးပို့စ်တင် လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်...(မတိုက်တွန်းလည်း ရေးကြမှာပါပဲလေ)
hive-122133 myanmar life hive ccc palnet
ဟိုက်ပန်းပွင့်ကြီးမှာ ပျားတွေအုံးတာ သိရက်နဲ့ဗျာ။
စုထားတာလေးတွေက အချိန်မတန်မီ ထုတ်သုံးမိလိုက်တာကိုးဗျ
golden.future tipped ansoe (x1)
@sheinthu(7/10) tipped @ansoe (x2)
ကျုပ်ကတော့ ပျား လို မနေမနား hive စုဆောင်းနေပါတယ်ဗျာ
@ansoe, I sent you an $LOLZ on behalf of @tin.aung.soe
ဦးစိုးက ပျား လား ယင်လား ပျား နှင့် ယင် ကြားလား
ချိုမြိန်တဲ့ ပန်းဝတ်ရည်ကိုစုတ်ယူ လူသားတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနေနိုင်တဲ့ ပျားလေးပဲ ဖြစ်ပါရစေ ☺️ အကျိုးမဲ့တွေကိုသာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ယင်ကောင်ကြီးတော့ မဖြစ်ပါရစေနဲ့
ပျားလို ပုံပမာလေးကို သဘောကျ။!PIZZA
သဘောကျရင် hive များများရှာထား ဆာရှိန်း ☺
ယင်ကောင် အမုန်းဆုံးပဲ ပျားလေးတွေကတော့ စံပြအနေနဲ့ အတုယူသင့်ပါတယ်။ !LOLZ